🥇 Inkqubo yezikhululo zeenkonzo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 483
Inkqubo yezikhululo zeenkonzo
Ividiyo yenkqubo yezikhululo zeenkonzo
Odola inkqubo yezikhululo zeenkonzo
Ukulawulwa kwesikhululo seenkonzo ayisiyonto ilula kwaye kufuna ixesha elininzi kunye nezixhobo, ngakumbi xa isikhululo seenkonzo siqala ukwandisa icandelo loshishino, sinikezela abathengi baso iinkonzo ezininzi ngakumbi nangakumbi nganye efuna ulawulo olwahlukeneyo, ubalo-mali, kunye Iphepha kwinyathelo ngalinye lenkqubo yokulungisa imoto okanye nayiphi na enye inkonzo ebonelelweyo kwisikhululo.
Ayothusi into yokuba uninzi lwabaphathi bezikhululo zeemoto bazama ukufumana inkqubo eya kuthi ibancede ekulungelelaniseni ukuhamba kwesikhululo seenkonzo kunye nokunciphisa inani lomsebenzi odinisayo kakhulu kwaye kufuneka zenziwe ngesandla nokuba kukwiphepha okanye kwisoftware ngokubanzi yobalo njengeMS Word okanye i-Excel. Ukujonga inkqubo enjalo ayisiyonto ilula kuba isixa sokhetho kwintengiso yeenkqubo ezizenzekelayo zolawulo kunye neenkqubo zolawulo ziphezulu kakhulu, kodwa umgangatho uyahluka kangangokuba uye ube ngumcimbi onobuzaza. Nawuphi na usomashishini ufuna okona kulungileyo kwishishini lakhe kwaye iyaqondakala kuba ngaphandle kokuzenzekelayo kufanelekile ukwandisa ishishini lesikhululo seenkonzo ngaphandle kokuncama ixesha elininzi kunye nezixhobo kubasebenzi abaza kwenza imisebenzi emininzi yamaphepha. Ukongeza koku-ulawulo lwamaphepha emanyuwali ngaphandle kokusebenzisa nayiphi na inkqubo icotha ngokwenene eyenza ukuba abathengi balinde ixesha elide- kwaye ayisiyiyo le nto abathengi bayayithanda. Baza kukhetha ukutyelela nasiphi na isikhululo seenkonzo esiya kubanceda ngokukhawuleza nangokufanelekileyo kunaleyo isasebenzisa iphepha lesikhokelo njengeyona ndlela iphambili yocwangciso-mali.
Njengoko besigqibile ngaphambili, akunakwenzeka ukuba sikhuphisane kwimarike ngaphandle kokusebenzisa nasiphi na isoftware, kodwa ukukhetha enye yinto enzima kakhulu nayo. Isishiya nombuzo- yeyiphi inkqubo oyikhethayo? Yintoni afaneleke ukuba inkqubo ingxelo elungileyo okanye embi? Masiyiqhekeze ngento esiyifunayo ukuba senze isoftware kwasekuqaleni.
Nasiphi na isikhululo seenkonzo sifuna inkqubo eya kuthi ikwazi ukugcina umkhondo wedatha kunye nokuhamba kolwazi ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Isakhono sokufumana naluphi na uhlobo lolwazi ligama lomthengi, umhla wokundwendwela, uphawu lwemoto yabo, okanye nokuba loluphi uhlobo lwenkonzo abalunikiweyo lubaluleke kakhulu xa ujongene nabathengi abaphindayo okanye abanengxaki. Inkqubo enjalo kufuneka ikwazi ukusebenza noovimba beenkcukacha ngokukhawuleza, kodwa yintoni efunekayo ukuze ukufezekise oko? Okokuqala-into elula kunye neqondakalayo yomsebenzisi engazukuthatha xesha ukufunda nokuyisebenzisa kwaye okwesibini le nkqubo kufuneka yenziwe kakuhle, ngenxa yoko ayifuni ikhompyuter yezixhobo zakutshanje ukuze isebenze ngokukhawuleza. Ukudibanisa ezi zinto zimbini sinokufezekisa ukusebenza ngokukuko nangokukhawuleza kunye nesiseko sedatha.
Okulandelayo, sifuna ukuqiniseka ukuba inkqubo yethu inokuqokelela kwaye inike ingxelo yonke idatha yezemali eveliswa sisikhululo semihla ngemihla, ngenyanga, okanye nangonyaka kuba ngaphandle kokuba neengxelo ezinjalo kuba nzima kakhulu ukubona amandla kunye nobuthathaka inkampani kunye nokukhula kwayo kunye nophuhliso ngokuhamba kwexesha. Sebenzisa olo lwazi kuvumela ukuthatha izigqibo ezinomtsalane kunye nezinefuthe kwishishini kunye nokubona ukuba inkampani isilela kwaye idlula. Ukuba inkqubo yolawulo yokhetho inokuvelisa iigrafu kunye neengxelo ezakhiwa yiyo icacile kwaye imfutshane iya kuba yinzuzo enkulu ngakumbi ukuba nayo kunye nento uninzi lwabashishini abasaqalayo abacinga ngayo xa bekhetha isoftware efanelekileyo kwinkampani yabo.
Ke imfuneko enkulu elandelayo ekufuneka iphunyezwe yinkqubo yolawulo kukujongana nomsebenzisi. Ngelixa isenokungabonakali njengeyona nto inkulu ekuqaleni-yeyona nto iphambili ekukhetheni isicelo esifanelekileyo somsebenzi. Inkqubo elungileyo yobalo-mali inendlela elula neqondakalayo yokujongana nomsebenzisi eya kuqondwa nangubani na, nabantu abangenamava kancinci ekusebenzeni nokusetyenziswa kweekhompyuter kunye nesoftware yolawulo lweshishini, okanye abanamava neekhompyuter ngokubanzi. Ukuba ujongano lomsebenzisi ekulula ukuluqonda kubalulekile ukonga ixesha kunye nezixhobo kubasebenzi boqeqesho ngendlela yokuyisebenzisa kwaye ngokubanzi lulongezo olukhulu kuyo nayiphi na inkqubo yeshishini.
Emva kokujonga yonke into esele siyikhankanyile ngaphambili, sifuna ukwazisa ngesisombululo sethu sesoftware esasiyilelwe ngazo zonke ezi zinto zikhankanyiweyo ngaphambili-iSoftware yeUSU. Inkqubo yethu ayinayo yonke into esele ikhankanyiwe ngaphambili kodwa kuninzi kunye nokunye okuninzi, okuya kuba luncedo olukhulu nakweliphi na ishishini lesikhululo seenkonzo zemoto.
Ngoncedo lweUSU Software, kunokwenzeka ukuba uququzelele isiseko esinye, esimanyeneyo somthengi. Uyakwazi ukufumana nawuphi na umthengi kunqakrazo olumbalwa ngamagama abo, inombolo yemoto, okanye ezinye izinto ezahlukeneyo. Ulwazi malunga nabo bonke abathengi luya kugcinwa kwindawo yogcino-zincwadi ekhethekileyo enokuqhagamshelwa kwi-intanethi ukuze ulawule izikhululo zeenkonzo ezininzi ngaxeshanye.
Inkqubo yethu inokurekhoda idatha yabathengi eya kuthi ihanjiswe kamva kwaye ibakhumbuze ngenkonzo ngokuthumela umyalezo welizwi, iSMS, okanye umnxeba we-'Viber '. Usebenzisa inkqubo yethu, kunokwenzeka ukubala umvuzo wabasebenzi bakho ngezinto ezininzi ezithathela ingqalelo ngelixa usenza ukubala, njengohlobo lomsebenzi abawenzileyo, inani leeyure ezichithwe emsebenzini, kunye nomgangatho yiyo.
Khuphela i-Software ye-USU namhlanje kwaye uqalise ukuzenzekelayo ishishini lakho ngokukhawuleza nangokufanelekileyo!
Inkonzo yeemoto kunye neenxalenye zeemoto
accounting kwisikhululo senkonzo
Ukwenza ingxelo ngeendleko zokulungiswa
accounting kwinkonzo yemoto
ukubalwa kwemali yokulungiswa kwezithuthi
accounting yokulungiswa kwemoto
ukubalwa kwemali yokulungiswa koomatshini
accounting yokulungisa iimoto
Ukwenza i-accounting yemisebenzi kwisikhululo senkonzo
Isenzo sokwamkelwa kotshintshelo kulungiso
Isenzo sokufumana imoto
isicelo sezikhululo zenkonzo
into ezenzekelayo yesikhululo senkonzo
Ukubalwa kweenkonzo zenkonzo yemoto
Inkqubo yobalo lwenkonzo yemoto
Iinkqubo zokulungiswa kwezithuthi kunye nokulondolozwa kwazo
Isoftware accounting software
Uhlalutyo lwenkonzo yeemoto
Inkonzo yeemoto ezenzekelayo
ulawulo lweenkonzo zemoto
Iziko ledatha lenkonzo yeemoto
Inzuzo yenkonzo yeemoto
Inkqubo yenkonzo yeemoto
ukunikwa kwengxelo yemoto
isoftware yenkonzo yemoto
Isatifikethi sokwamkelwa kotshintsho lweemoto
Isenzo sokuhambisa imoto
Ulawulo kwisitishi senkonzo
Ulawulo lweemoto zokulungiswa
Ukulawulwa kwemisebenzi yolondolozo
Ulawulo lwemisebenzi kwinkonzo yemoto
Ubalo lwabathengi kwinkonzo yemoto
Ungazigcina njani iirekhodi zenkonzo yemoto
Inkqubo yokuphicotha iincwadi ngomatshini
Ukulungiswa komatshini kunye nenkqubo yokulungisa
Ulawulo lwenkonzo yemoto kunye nokuthengiswa kwemoto
Ulawulo lwezikhululo zeenkonzo
Inkqubo yolawulo lwesikhululo senkonzo
Inkqubo ye-auto accounting
Inkqubo yokuphicothwa kweencwadi ezizimeleyo
Inkqubo yokuphicothwa kwezikhululo zeenkonzo
Inkqubo yenkonzo ezenzekelayo
Inkqubo yeenxalenye ezizenzekelayo
Inkqubo yeevenkile zamanqaku ezithuthi
Inkqubo yokubala iindleko zokulungiswa kweemoto
Inkqubo yokubala iiyure
Inkqubo yokulungiswa kwemoto
Inkqubo yokuphicothwa kwabathengi ngenkonzo yemoto
Inkqubo yokulungisa ezenzekelayo
Inkqubo yomatshini wokulungisa
Inkqubo yokuthengisa iinxalenye ezizenzekelayo
Inkqubo yezinto zokubalwa kwemali
Inkqubo yokuthengisela iinxalenye zeemoto
Inkqubo yendawo yokugcina izinto zeear auto
Rekhoda kwisikhululo senkonzo
Izicelo zenkonzo yemoto
Izicelo zezikhululo zenkonzo
Ulawulo lwesikhululo senkonzo
Iindawo zokuthengiswa kwemali kwiindawo ezinokuthengiswa
Inkqubo yolawulo lwezikhululo zenkonzo
Inkqubo yokulungisa ngokuzenzekelayo
Inkqubo yesikhululo senkonzo
Isatifikethi semvume yokwamkelwa kwezithuthi
Isatifikethi sokuvunywa kwesithuthi
Itayitile yokudluliselwa kwezithuthi